Android Oreo inosvika uye haizogadzirise matambudziko eApple kana | IPhone nhau
Android iguru sisitimu yekushandisa, zvakanyanya zvekuti isu tiri kutaura chaizvo nezve yakanyanya kushandiswa nhare yekushandisa sisitimu munyika, zvakare iine yakawanda misiyano zvine chekuita neIOS. Zviri pachena kuti chokwadi chekuti Android ine zvishandiso zvemhando dzakasiyana siyana uye mitengo inokanganisa chokwadi chekuti akawanda akawanda mauniti anotengeswa kana kushandiswa.
Nekudaro, zvaive zvishoma kwazvo kuti isu taiziva zita chairo reiyo nyowani vhezheni yeApple 8.0, uye haisi imwe kunze kweinonaka Oreo kuki. Nekudaro, isu takatarisana neimwe yeiyo Android editions iri kusimudza tarisiro shoma ... Nyanzvi dzatove dzakakanda tauro pane homogenization yeApple? Ndofunga kudaro.
Uye ndezvekuti ne Android Oreo isu tichaenda kunotsvaga yakawanda a pulido yeiyo inoshanda sisitimu iyo inonakidza kugadziridza, ichiwedzera mashandiro aive hafu sePikicha-Mu-Mufananidzo munzira yakasarudzika pamidziyo yese uyezve chizvarwa chiziviso chiziviso mukati meiyo logo yezvishandiso. Zvimwe zvese zvekuvandudza zviri pachena zvakanyanya pane manejimendi ye RAM ndangariro nebhatiri, pamwe nemabasa epamberi, iwo agara ari chipingamupinyi chikuru cheiyo Android uye chikonzero nei vachida mbishi Hardware kuti ishande zvishoma.
Zvichakadaro, isu tinoona kuti isingasviki 14% yevashandisi veApple vanoshandisa vhezheni 7.0 Nougat, muchokwadi iri rakatumidzwa zita naMarshmallow, Lollipop uye kunyangwe Kit-Kat, iyo yekupedzisira vhezheni ya2014, inguva iyo iyo yeminwe yekuverenga Fingerprinting yakanga isina kana. chiyero pa Android. Muchidimbu, zvese zvinoratidza kuti Android 8.0 Oreo haizomboedza kubatanidza Android, nyanzvi dzakakanda tauro uye dzakanangana nekugadzirisa iyo sisitimu inoshanda mushure mezviitiko zvangu mukuwongorora (tiri kutaura nezve Android Nougat) inoshanda zvinopfuura nemazvo uye mutsauko neIOS ishoma uye zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Android Oreo inosvika uye haizogadzirise matambudziko eApple futi
Iyo Samsung Galaxy Note 8 inogona kuchengetwa mangwana kuSpain